Amasayithi Wokubamba Isoftware Amahhala Futhi Avulekile: Kuhle kakhulu ngo-2020 | Kusuka kuLinux
Kwethu okuthunyelwe kwangaphambilini mayelana Ihabhu evulekile, sishilo ukuthi yibo Amasayithi Wesiqondisi Sesoftware, futhi sisho ezinye zazo, ikakhulukazi ezinikezelwe ku- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile. Kulokhu okuthunyelwe sizogxila kwi Amasayithi Wokubamba Isoftware (Ukusingathwa Kwekhodi) ilusizo emphakathini wethu, ikakhulukazi ngesikhathi se- ngonyaka we-2020.
Imvamisa, futhi njengenjwayelo, ingxenye enhle ye- onjiniyela nabasebenzisi abaphambili noma cha, we Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile, yazi futhi usebenzise ezinye zalezi Amasayithi Wokubamba Isoftware, kepha iqiniso ukuthi uhla lwezinketho lubanzi kakhulu futhi kufanelekile ukubazi bonke.
Njengoba sichazile kokuthunyelwe okungenhla, Amasayithi Wokubamba Isoftware Yilezi:
" … Izizinda zeWebhu ezisekela noma ezinikeza ngethuluzi lokusingathwa kwekhodi, elizosetshenziswa njengokulawula inguqulo. Ngaleyo ndlela, ukuvumela onjiniyela ukuthi basebenze ndawonye kumaphrojekthi amaningi. Kulawa masayithi, ikakhulukazi i-Free Software kanye ne-Open Source, kunezindawo eziningi lapho i-GitHub ivelele khona, ... ".
2 Izindawo Ezingcono Kakhulu Zokuvula Isoftware Ezikhululekile Nezikhulu
2.1 Kumahhala, kuvulekile futhi kumahhala
2.1.1 U-Apache Allura
2.1.7 Okunye okwaziwayo
Ngoba GitHub kungenye yezinto ezaziwa kakhulu, sizokhombisa uhlu oluncane lwe Amasayithi Wokubamba Isoftware, kokubili mahhala, kukhululekile futhi kuvulekile, futhi kuyentengiselwano, okungaba inketho esebenzayo nesebenzisekayo yokuyishintsha GitHub.
Lokhu kungenxa ye- GitHub, yize uyi ipulatifomu yentuthuko online inamandla futhi ivikelekile, futhi idume ngokusingathwa kwamaphrojekthi wesoftware, isebenzisa I-Git njengendlela yokulawula inguqulo, nokunikezela ukubamba (izinqolobane) ukuze amaphrojekthi womthombo ovulekile, kanye nesoftware yangasese (ephathelene kanye / noma yezentengiso), ngoba itholwe ngu Microsoft, abaningi baye bakugwema ukuyisebenzisa futhi bathuthela kwamanye amapulatifomu ahlukile.
Ngakho-ke, Amasayithi Wokubamba Isoftware okulandelayo kungenye indlela enhle yoku GitHub ukufaka indlu amaphrojekthi womthombo ovulekile lokho kuyadingeka.
Izindawo Ezingcono Kakhulu Zokuvula Isoftware Ezikhululekile Nezikhulu
Kumahhala, kuvulekile futhi kumahhala
Kungukusetshenziswa komthombo ovulekile kwe-software forge, iwebhusayithi ephatha amakhosombe ekhodi yomthombo, imibiko yeziphazamiso, izingxoxo, amakhasi we-wiki, amabhulogi, nokuningi kwanoma iyiphi inombolo yamaphrojekthi ngamanye. Izici zokuphathwa kwekhodi yomthombo zikuvumela ukuthi usebenze neGit ne-SVN. Ngaphezu kwalokho, futhi ihlanganisa izicelo, izimfoloko, phakathi kokunye ukusebenza. Inikeza uhlu lwamakheli noma iforamu noma zombili izindlela ezihlanganisiwe zokuvula izingxoxo futhi inohlelo olusebenza kahle kakhulu lokulandela umkhondo wesiphazamisi.
Iwebhusayithi enikezela ukuhamba komsebenzi okuphelele kokubhala, ukubuyekeza, nokuhambisa ikhodi. Ngakho-ke, iyindlela enhle kakhulu, ephephile, enamandla futhi enokwethenjelwa kwi-GitHub. Kwenza ukuphatha izinqolobane zamakhodi wakho womthombo kube lula, njengoba yakhelwe ukuthuthukisa ukuhamba komsebenzi wakho wokuthuthuka. Izici zayo ezivelele zibandakanya ukuhlinzeka ukwesekwa kokusingathwa nge-Git ne-SVN, ukwenza ngokwezifiso ukucushwa kokuthunyelwa kwemvelo ngayinye, nokuvumela izinhlobo ezimbili zempendulo phakathi kwabahlanganyeli, izihloko nezingxoxo.
Kuyipulatifomu yokuthuthukisa enamandla enamandla, esabekayo ngokuphelele, eyenzelwe amaqembu ochwepheshe. Lapho abasebenzisi bezemfundo nabathuthukisi bamaphrojekthi wemithombo evulekile bathola ama-akhawunti wamahhala. Ikuvumela ukuthi ungenise kalula amakhosombe we-GitHub ngezinyathelo ezi-6 ezilula, futhi isekela ukuhlanganiswa komuntu wesithathu. Inezici eziphawuleka njengamaphayiphi weBitbucket, ukubheka ikhodi, izicelo zokudonsa, amamodeli wokuhambisa aguquguqukayo, ukubuka okwehlukile, isibuko esihlakaniphile, ukulandelela ukukhishwa, phakathi kokunye okuningi.
Ingumthombo ovulekile, onamandla, ovikelekile, osebenzayo, ocebile ngezici, futhi onamandla wokusingatha ukuthuthukiswa kwesoftware nokusebenza kwempilo. Kwabaningi, lokhu kungukuphikisana okuhamba phambili kwe-GitHub, njengoba isekela ingqophamlando yeqembu, ukulandelela ukukhishwa, amabhodi wezinkinga okulungisekayo nezinkinga zeqembu, ukuhamba kwezinkinga phakathi kwamaphrojekthi, nokuningi. Iphinde isekele ukulandelwa kwesikhathi, amathuluzi anamandla we-branching, namagatsha avikelwe namathegi, phakathi kwezinye izici eziningi.
Yipulatifomu emahhala naziwa ngokuphelele yokwakha, ukuphatha nokusebenzisana kumaphrojekthi wesoftware, akhiwe yiCanonical, abadali be-Ubuntu Linux. Inezici ezinjengokusingathwa kwekhodi, ukwakhiwa kwephakeji le-Ubuntu, nokusingathwa kokulandela ngomgudu, ukubuyekezwa kwamakhodi, uhlu lwama-imeyili nokulandelwa kwe-spec. Ngaphezu kwalokho, iLaunchpad isekela ukuhumusha, ukulandelwa kwempendulo, nemibuzo ebuzwa njalo.
Kungumthombo ovulekile wokuthuthuka nokusatshalaliswa kwesoftware eyakhelwe ukusingatha ngqo amaphrojekthi womthombo ovulekile. Iphethwe kungxenyekazi ye-Apache Allura, futhi isekela noma yiliphi inani lamaphrojekthi ngamanye. Kungakho-ke, ithathwa njengomthombo oyisisekelo womthombo ovulekile womphakathi ozinikele ekusizeni amaphrojekthi womthombo ovulekile ukuba uphumelele ngangokunokwenzeka. Amandla ayo amakhulu amanje alinganiselwa kumaphrojekthi angaphezu kwama-430.000; Abasebenzisi ababhalisile abayizigidi ezingama-3,7, izivakashi zansuku zonke eziyizigidi ezingama-35 kanye nokulandwa kwesoftware okungaphezu kwezigidi eziyi-4,5 ngosuku.
Amakhosombe Omthombo Wamafu
ukwesaba ukukhuluma neningi
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalokhu okuwusizo nokusebenzayo «Sitios de Alojamiento de Software Libre y Abierto» evumela abaningi ukuthi bathuthukise, banikele noma bahlanganyele omunye nomunye, ukudala uhlelo lwethu lwamanje nolukhulayo lwe-software ecosystem, lube nentshisekelo nokusetshenziswa, kulo lonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Amasayithi Wokubamba Isoftware Amahhala futhi Avulekile: Kuhle kakhulu ngo-2020